SERASERA, TENY MALAGASY: 17/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 17/02/11
17 Février 2011, 22:02pm
RAJOELINA – RAVALOMANANA: IZA NO TENA MILA AMNISTIA?
Vao misy hoe hody i Dada dia efa mijoro ny ministry ny FAT hoe «hitsangana ny fitsarana, ary tsy horebireben’ny politika».
Dia lasa ny saina aman’eritreritra ary manontany tena ihany hoe «fa nanao inona marina moa iny rangahy iny ?». Niaro ny fananam-panjakana mba tsy nisian’ny fandrobana nihoa-pampana tamin’ny 7 febroary ? Niezaka nampandroso ary tsy mba nandainga tamin’ireo vahoaka nentiny ka nampanantena tsy misy tahaka ny ankehitriny ? Niady tamin’ny kolikoly mba tsy hisian’ny mpanao politika tsy voafehy ka hanao fanaparam-pahefana etsy sy eroa tahaka ny amin’izao fotoana ? Dia hoy ny sasany hoe «satria nahafaty namono olona efapolo dia nahavita heloka bevava». Fa ny mahavariana mantsy dia ity, tsy fitiavana hanisa faty na hampitaha fa ny zava-misy kosa dia tsy azo kosehina. Tsy efa ho fitopolo mahery ve ny … (Suivre le lien)
Fiveranan’i Dada Mikorotan-tsaina tanteraka ny FAT
Mazava ary tsy takona afenina intsony fa mikorontana ambony ambany amin’izao fotoana izao ny FAT manoloana ny vaovao misy na koa ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana amin’ny sabotsy izao.
Samy nilaza ny heviny avokoa ary hita fa mifanohitra ny feon’ny tsirairay avy. Ny lapan’Ambohitsorohitra omaly dia nilaza fa misy fepetra noraisina avy hatrany manoloana ny zava-misy. Miompana indrindra indrindra izany amin’ny fampitandremana ireo izay mikasa ny hanakorontana. Ny filankevitry ny minisitra omaly ihany koa dia io no mbola nibahan-toerana. Taorian’ny filankevitra tsotra aza dia nisy iray hafa manokana indray izay ny ministra miandraikitra ny fandriampahalemana ihany no nandray anjara tamin’izany. Ny fanambaran’ny Emmo-Nat, natao tetsy amin’ny toby Ratsimandrava ny harivan’ny omaly, dia mbola nampitandrina ihany koa ireo izay … (Suivre le lien)
Manjakatompo Andranomanelatra Nosavaina ny tranon’i Tojo Ravalomanana
Nanaovan’ny mpitandro ny filaminana bemidina tao amin’ny fananan’ny filoha Ravalomanana ao Andranomanelatra omaly tolakandro. Hanao fisavana no anton-dian’izy ireo, ary fantatra fa nitondra taratasy avy amin’ny lehiben’ny fampanoavana avy ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antsirabe nanatanterahana izany.
«Baiko midina io», araka ny loharanom-baovao akaikin’ny mpitandro ny filaminana. Kamion’ny Tiko avy naka sakafom-biby tao amin’ny TOP Antsirabe no nosakanan’ireo andia-miaramila ireto hitondra azy ireo hatrao Andranomanelatra. Omaly tokony ho tamin’ny efatra ora sy sasany io. Nanomboka teo amin’ity orinasa ity ny fanadihadiana. Tsy tao anefa no tena anton-dian’izy ireo fa tao Manjakatompo, toerana somary mihataka sy takontakona ity orinasa Tiko ao Andranomanelatra ity. Nihazo ny biraon’ny Ben’ny tanàna ny sasany tamin’izy ireo, toa hoe … (Suivre le lien)
Fanambaran'ny Tafika Tsy niseho sehatra ireo ministra
Niala tsy nety nanao fanambarana ireo ministra misahana ny filaminana eo anivon'ny FAT omaly tao amin'ny Toby Ratsimandrava. Araka ny hita teny an-toerana dia efa tao amin'ity Toby ity avokoa ireo ministra ireo toy ny avy amin'ny Foloalindahy, ny Filaminana anatiny ary ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandary. Nisy, angamba, ny tsy fitovian-kevitra ka nanapa-kevitra izy ireo fa tsy hanao fanambarana fa omena ireo lefitra manao izany. Na ny eo anivon'ny zandary aza dia ny lefitra faharoa no nanao ilay fanambarana.
Tsy mahagaga rahateo izany satria raha vao misy ny tranga mahamay eto amin'ny firenena tahaka ireny teny amin'ny FIGN ireny dia tsy hita ny jeneraly Razafindrakoto Bruno. Hatry ny omaly ireto ministra ireto no efa tsy … (Suivre le lien)
ANKOLAFY TELO: « Asabotsy mifankahita »
« Asabotsy mifankahita… Ho avy i Dada ary ny fahatongavany, tsy ho an’ny ankolafy telo ihany fa ho an’ny vahoaka malagasy », hoy ny depiote Rodin tao amin’ny Magro Behoririka, omaly. Nohamafisiny fa ampy izay ny horohoro sy ny tsy filaminana ary izao fahorian’ny malagasy izao. « Leo ny fitaka isika… avelao ho avy ny raiamandreny », hoy ihany izy. Ho an’ny depiote Leriva Manahira, nambarany fa tokony hatsahatra ny tsy fifankahazoana eo amin’ny samy mpiara-dia, ny ankolafy telo ary ny vahoaka malagasy. « Ilaina ny firaisankinan’ny malagasy », hoy … (Suivre le lien)
FAHATONGAVAN-DRAVALOMANANA : Ho hentitra ny Fitondrana tetezamita
Namoaka fanambarana hentitra, omaly, ny Filankevitry ny minisitra, araka ny tatitry ny ao Ambohitsorohitra, manoloana ny vaovao fa hiverina eto ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Nisy Filankevitra manokana ho an’ireo minisitra voakasiky ny filaminana.
Nodinihina manokana nandritra ny Filankevitry ny minisitra, omaly, ny fielezam-baovao fa hitodi-doha an-tanindrazana ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Ankoatra ny fijerena ireo fepetra iatrehana ny famatsiana vary sy siramamy mbamin’ny fandalovan’ny rivodoza, nandray fepetra hentitra ny mpitondra ny tetezamita, izay halefa manontolo eto. « Manoloana ny filazana natao imasom-bahoaka mikasika ny fiverenana an-tanindrazan’ny Filohan’ny Repoblika teo aloha, ny Fiadidiana ny Fahefana Avon’ny Tetezamita dia manambara mazava sy hentitra amin’ny besinimaro fa handray ireo fepetra rehetra tandrify azy ny Fanjakana mahefa manoloana ireo izay mety halaim-panahy hanohintohina na hanakorontana ny filaminana sy ny fahalemana manerana ny Tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Araka izany, na iza na iza, voasaringotra mivantana na … (Suivre le lien)
Fodian-dRavalomanana amin’ny sabotsy
Hanao fanambarana goavana koa ny HMF anio
Mitana ny sain’ny rehetra indray ary ambetin-dresaky ny maro eny rehetra eny amin’izao fotoana ity resaka fodian-dRavalomanana amin’ny sabotsy ity. Mitotorebika sy faly ny mpomba sy mpanohana ity Filoha teo aloha ity satria efa nandritra ny roa taona no niandrasana an’ilay andro “ho malaza”. Mihoron-koditra kosa ry zareo ao amin’ny fitondrana FAT. Inona no antony?
Fa hanao fanambarana goavana momba an’ity fiverenan’i “Dada” ity ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana anio. “Vao nivoaka iny vaovao iny dia betsaka no nanontany ny hevitray momba izany. Mankasitraka tanteraka ny … (Suivre le lien)
Zanak'i Dada 19/02/2011 12:43
Tsy tokony hipetraka intsony ny fanontaniana hoe:"iza no tena mila amnistia" satria teo ambany mason'ny vahoaka ny famonoana sy famotehana nataon'i Rajoelina teto, ny famadihana tanindrazana
amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ireo vahiny, ny lainga tsaralahatra natao teto nandritra ny 2 taona izay.AMPY ZAY TOKONY HODORANA VELONA EO AMIN4NY 13 MEY IREO FAT IREO
rovahiga 19/02/2011 20:17
Miala tsiny raha izao vao afaka mamaly ny hafatra nataonao noho ireo vaovao maro tsy maintsy notrandrahana. Fomba fiteny moa ny hoe "dorana velona", fa na ny fampianarana azo tamin'i Dada ihany
aza dia tsy ho tonga amin'izany isika. Fa eny tokoa, mitovy tanteraka ny hevitsika raha ny mikasika ny nataon'ireo mpanongam-panjakana ireo, ary izay indrindra no maha vaka amin'ireto fiaraha
minina iraisam-pirenena ireto fa tena mitanila sy manampy an'ireo "meloka" ireo mihitsy. Misy ihany anefa ny "farany", fa izay tsy andrin'ny hafa andri-tsika foana.
Misaotra amin'ny fanehoan-kevitra ary aza misalasala ny miteny sy manoro làlana hatrany.